Beelaha Hawiye oo shir aan caadi ahayn ku yeelanaya Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Beelaha Hawiye oo shir aan caadi ahayn ku yeelanaya Muqdisho
Waxaa si xooggan Muqdisho caawa looga daremayaa qaban qaabada shir weyne, ay isugu imaanayaan beelaha Hawiye, kaas oo la qorsheeyay inuu Caasimadda ka dhaco Isniinta soo socota si go’aan looga gaaro muddo kordhinta loo sameeyay Farmaajo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Kadib muddo kordhintii uu Golha Shacabka u sameeyay Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, wuxuu dalku galay xaaladdii ugu xumeyd oo kala shaki iyo kala firxad ah, waxaana dal iyo dibadba si adag looga hor himid waqti siyaadinta sharci darrada ah.
Waxaa la rumeyesan yahay, natiijooyinka aan wanaagsaneyn ee ka dhalan doona, muddo kordhinta, halka ugu badan ay saameyneyso in ay tahay Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, oo ah xarunta Dowladda Fadaraalka, waxayna taasi sababtay in dadka deggan ka tashtaan aayahooda, go’aanna ka soo saaraan waddada mugdiga ah ee dalka lagu wado.
Kadib kulamo, gooni gooni ah oo Muqdisho ka socday Saddexdii Caano-maal ee la soo dhaafay, waxaa la go’aamiyay in isbuuca soo socda la qabto shir weyne ay ka soo qeyb galayaan guud ahaan Beelaha Hawiye, si go’aan rasmi ah looga qaato, Hay’adaha waqtigu ka dhamaaday ee Laanta Fulinta ugu horreyso.
Waxaa maanta ilaa caawa Caamisamadda laga dareemayaa qabanqaabo xooggan oo loogu diyaar garoobayo shirka, waxaana isku dibaridaya guddiyo ka socda Musharaxiinta, odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiin xilal hore u soo qabtay, hayeeshee aan ka mid ahayn Golaha Midowga Musharixiinta.
Kulankaan waxaa fursaddii ugu danbeysay lagu siinayaa Madaxweynayaasha Galmudug iyo HirShabeelle, Qoorqoor iyo Guudlaawe, oo laga doonayo in ay si buuxda Fagaaraha Shirka iyo saxaafadda horteeda ugu caddeeyaan mowqifkooda ku aaddan muddo kordhinta, waxaana siidaas lugu heshiiyay, kadib kulamo dhex maray iyaga iyo Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya.
Dadka degan Muqdisho ayaa la rumeysan yahay in ay dhibka ugu badan u geysatay Dowladda waqtigeedu dhamaaday ee Farmaajo hoggaamiyo, Siyaasad ahaan, degaan ahaa, dad ahaan iyo Dowlad ahaanba, waxaana ugu danbeeyay weerarkii lagu qaaday Saadq Joon oo sababay in dalku qarka u fuulo dagaallo aan dhamaadkooda la qiyaasi karin.